News Collection: यस्तो अवस्थामा मैले ऊसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु राम्रो होला ?
यस्तो अवस्थामा मैले ऊसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु राम्रो होला ?
म १९ वषर्ीया युवती हुँ। हाल १२ मा पढ्दैछु। म एक २८ वषर्ीय युवकलाई मन पराउँछु। उसले पनि मलाई माया गर्छ। हामीबीच शारीरिक सम्पर्क हुन थालेको दुई वर्ष भयो। उसले मलाई यति सन्तुष्टि दिन्छ कि म त्यसको बयान गर्न सक्दिनँ। समस्या के छ भने न ऊ मसँग विवाह गर्न चाहन्छ, न म नै ऊसँग विवाह गर्न तयार छु। उसको र मेरो गन्तव्य फरक छ। हाम्रो विवाह असम्भव छ। यस्तो अवस्थामा मैले ऊसँग यस्तो सम्बन्ध राख्नु राम्रो होला ?
प्रेमको परिभाषाले तपाइर्ंको समस्यालाई फरक तरिकाले सम्बोधन गर्छ। एकथरी मानिसहरू -यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ) यौनसम्बन्धलाई शरीरको आवश्यकता मान्छन्। उनीहरूको नजरमा यौनसम्बन्धका लागि प्रेम हुनु आवश्यक हुँदैन। शरीरको आवश्यकता पूरा गर्ने यो क्रमले तपाईंको जटिलतालाई बढाउन सक्छ। कतिपय मानिस -प्रेममा नैतिकताको सिमाना खोज्नेहरू) विवाहपूर्वको वा शरीरको आवश्यकताअनुरूप स्थापना गरिएको सम्बन्धलाई पाप सम्झन्छन्। दुवै अवस्था मानिसको सोचाइद्वारा निर्देशित हुन्छ। तपाईंको हकमा तपाईंले अहिले गरिरहनुभएको 'काम' कुन श्रेणीमा पर्छ ? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यौनलाई तपाईंले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले लिनुभएको छ भने तपाईंले आफ्ना शारीरिक आवश्यकता सहज रूपमा पूरा गरिरहनुभएको छ। त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन र अबका दिनमा त्यस्तो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने कुरा तपाईंको निजी र वैयक्तिक अधिकारका सिमाभित्र अटाउँछन्। यद्यपि विवाहपूर्वका यस्ता सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने जटिलताका सम्बन्धमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनुभएकै होला। रह्यो नैतिक पक्षको प्रश्न, त्यसका पनि आ-आफ्नै परिभाषा छन्। पश्चिमा समाजको कुरा छाडौं, अहिले पूर्वीय समाजमा पनि विवाहपूर्वको यौनसम्बन्धका बारेमा व्याप्त भ्रम र कथित परिभाषाका सिमानाहरू क्रमशः भत्किँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाइर्ंलाई जे उचित लाग्छ गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने वैयक्तिक अधिकारको प्रश्नमा तपाईंलाई कसैले कुनै पनि अवस्थामा थुनछेक गर्न सक्दैन। फेरि पनि म विवाहपूर्वकको सम्बन्ध अनि त्यसले निम्त्याउने सामाजिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा भने तपाईंलाई सचेत गर्न चाहन्छु, अन्यथा यस्तो सम्बन्धको परिणाम तपाईंले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ र तपाईंलाई थाहै छ, यस्ता सम्बन्धमा युवतीहरू बढी प्रताडित हुन्छन्। त्यतिबेला तपाईं अरूलाई दोष देखाएर उम्कन सक्ने स्थितिमा रहनुहुन्न।